Uyifumana njani imali kwiGoogle Play | I-Androidsis
Kungenzeka ukuba ngamanye amaxesha uthenge isicelo kuGoogle Play, kodwa emva kwethutyana, uyazisola ngokuthenga kwakho. Kwezi ntlobo zeemeko, sihlala sinethuba lokubuyisa isicelo sokubuyiselwa imali. Nangona kubasebenzisi abaninzi, le nkqubo ayaziwa. Ke ngoko, ngezantsi siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga noku. Ke unokubuyisa izicelo kule meko.
Kubalulekile ukwazi oku, kuba izicelo zihlala zithengwa. Kwiimeko ezininzi asazi kwangaphambili ukuba iya kusinika ukusebenza ebesikufuna. Inxalenye elungileyo yile Ukudlala kukaGoogle kusinika amandla okufumana imbuyekezo.
1 Ukubuyiselwa imali kuGoogle Play
2 Ukubuyiselwa imali zingaphelanga iiyure ezimbini
3 Ukubuyiselwa imali ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-48 emva kokuthenga
4 Kwiintsuku ezimbini emva kokuthenga
Ukubuyiselwa imali kuGoogle Play
Eli nyathelo lazisiwe ngexesha elithile elidlulileyo. Abasebenzisi abathenga usetyenziso kuGoogle Play banelungelo lokwenza imbuyekezo ngaphandle kokunika inkcazo. Nangona kunjalo, kukho imeko ephambili ekufuneka siyikhumbule ngalo lonke ixesha. Ukusukela ngoku kufuneka sikwenze kwiiyure ezimbini emva kokuthengwa kwesicelo esele sithethiwe. Ezi yure zimbini zexesha zibaluleke kakhulu.
Ukuba sikwenza ngeli xesha, emva koko asinangxaki kwinkqubo. Ukuba ezi yure zimbini zidlulile, izinto ziya zisiba nzima, nangona kusenokwenzeka ukuba siyifumene le mbuyiselo. Siyakuchaza kwimeko nganye, nendlela ekufuneka sisebenze ngayo. Kuba yahlukile.
Ukubuyiselwa imali zingaphelanga iiyure ezimbini
Uthenge isicelo kuGoogle Play kwaye zingaphelanga iiyure ezimbini, uyazisola. Ke ngoko, uthatha isigqibo sokuba awufuni ukusebenzisa esi sicelo kwifowuni yakho ye-Android. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukususa usetyenziso kwifowuni. Into elandelayo ekufuneka siyenzile yiya kwifayile yesicelo esichaziweyo kwiVenkile yokudlala. Ukusukela apho siza kufumana ukhetho "lokufumana imali kwakhona." Kufuneka nje ucofe kuyo.
Enye indlela yokwenza oku kukuya kuGoogle Play kwaye ufake icandelo "lezicelo zam kunye nemidlalo".. Emva koko yiya kwithebhu efakiweyo emva koko ujonge usetyenziso kuluhlu. Iya kuphuma emva koko ucofe amanqaku amathathu athe nkqo aphuma ecaleni kwayo. Ngokwenza njalo, uya kuba nakho ukucela ukubuyiselwa imali.
Ukubuyiselwa imali ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-48 emva kokuthenga
Ukuba ezi yure zimbini zikhankanywe apha ngasentla sele zidlulile, sisenalo ithuba lokufumana imbuyiselo. Nangona kunjalo, kule meko Yinkqubo elawulwa nguGoogle uqobo, engaqinisekisi ukuba siya kuyifumana imali kuzo zonke iimeko. Uninzi lwexesha lihamba kakuhle, kodwa kunokuba kunjalo ukuba awunalo ithamsanqa elifanayo. Kule meko, kuya kufuneka sithathe la manyathelo:
Ngena ngaphakathi iakhawunti yakho yeGoogle Play. Kule meko kungcono ukuba ungene kwikhompyuter, kodwa kunokwenzeka kwifowuni yakho ye-Android, usebenzisa isikhangeli.
Yiya kwimbali yoku-odola, apho ufumana zonke ii -apps ozithengileyo
Fumana usetyenziso olufuna ukufumana le mali
Cofa kumanqaku amathathu avela ngasekunene
Khetha ukhetho "lokufumana imali"
Iphepha lemibuzo liza kuboniswa kwiscreen, apho unokukhetha khona isizathu sokubuya
UGoogle uza kufunda ngetyala lethu, kwaye kwiintsuku ezimbalwa siyakwazi ukuba siyayifumana okanye hayi. Kwiimeko ezininzi oku kuhlala kunjalo. Ke kufuneka sigcine ithemba.
Kwiintsuku ezimbini emva kokuthenga
Nje ukuba ezi ntsuku zimbini zidlule, imeko iba nzima ngokubonakalayo. Ukudlala kukaGoogle akusiniki zinketho ezininzi kwakhona. Ngapha koko, bona ngokwabo basinika ithuba, eliyiloo nto Masibhalele i-imeyile kubaphuhlisi besicelo esele sithethiwe. Ukuba isizathu sokubuya kukuba kukho ukusilela kule app, ayisiyongxaki ukufumana le mali.
Kodwa ukuba kungenxa yokuba sizisola ngokuthenga, amathuba aphantsi. Kwithebhu yesicelo kwiVenkile yokudlala sihlala sinayo i-imeyile yenkampani. Singayisebenzisa ukunxibelelana kwaye sichaze imeko yethu (ngesiNgesi kwiimeko ezininzi). Unokuba nethamsanqa kwaye ufumane imali yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyifumana njani imali ebuyiswayo kuGoogle Play
dolores garcia dominguez sitsho
Molo, bendifuna ukurhoxisa isigxina isigxina se-99 sentimos kwisicelo se-celiac esiphathwayo.
ngezizathu zokuba esi sicelo asisasebenzi kum..enkosi
Phendula kwiidolores garcia dominguez